I-China i-Overseas order enkulu isayine kwakhona! I-HYT yokunciphisa ngokuthe ngqo ukuphumelela ifumene iziphumo ezilungileyo. Umzi mveliso kunye nabenzi | IHarmonic
I-odolo enkulu yaphesheya isayine kwakhona! I-HYT yokunciphisa ngokuthe ngqo ukuphumelela ifumene iziphumo ezilungileyo.
HENGYITONG OOMATSHINI Chinese phambili R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kweemveliso ukuhanjiswa ngqo. Kubandakanywa izinciphisi zeplanethi ezichanekileyo, iiharmonic reducers, amaqonga ajikelezayo, ukuhambisa izithuthi kunye nezinye iimveliso, ineqela lobuchwephesha lobuchwephesha kubandakanya iingcali zaseJapan zokubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha. "Engaqhelekanga kunye nokwenza ngokwezifiso, ukudala umenzi okhokelela kwimakethi wezisombululo zothumelo ezichanekileyo" ecetywayo sisicwangciso sikaHENGYITONG kwi2020.
Njengecandelo eliphambili lenkqubo yokuhambisa, isinciphisi sokuchaneka sinendawo ebanzi yentengiso, ngenxa yophuhliso olukhawulezayo lwamashishini afana neerobhothi zeshishini kunye nezixhobo eziphezulu zomatshini we-CNC. Njenge "nkokheli" yomzi mveliso, u-HENGYITONG ukhokele ekugqibezeleni inguqu yesazisi ukusuka kumenzi ukuya kumenzi ophambili wentengiso kunye nomthengisi wesisombululo sezisombululo zothumelo ezichanekileyo. HENGYITONG uzimisele ulwalathiso olutsha lophuhliso: Ukuphucula ukhuphiswano kwinqanaba lemveliso ukuya kwinqanaba lesisombululo.
Kutshanje, i-HENGYITONG ityikitye isivumelwano se-mass order kunye nabathengi eMbindi Mpuma kulungelelwaniso oluphezulu lweeplanethi, izinciphisi zeharmonic kunye nezinye iimveliso. Oku kuyimpumelelo yesicwangciso-qhinga "esingaqhelekanga" se-HENGYITONG ngo-2020. Ngombono kunye nezixhobo zikaWuxi HENGYITONG, umgangatho wemveliso ogqwesileyo kunye nenkqubo, kunye neminyaka emininzi yamava oshishino ekuthumeleni kwamanye amazwe kwiimarike zaseYurophu nezaseMelika kunye nebhetshi eqhubekayo unikezelo, ngokweemfuno ezizodwa ezibekwe phambili ngabathengi kuMbindi Mpuma, ifom "yokwenza ngokwezifiso", igcwalise iimfuno zabathengi ngokubanzi. Le ntsebenziswano ibonisa ukungena kukaHENGYITONG ngokusesikweni kushishino lokulungisa ubucwebe kwimakethi yakuMbindi Mpuma. Kukukhula kweemarike zaphesheya emva kweminyaka emalunga neyi-20 yentengiso yasekhaya enzulu.
HENGYITONG iqulunqwe eneenkcukacha "IsiCwangciso-seminyaka emihlanu-Market Global" ngo-2018. Le nkampani iye iqela ukuthengisa phesheya yobungcali kwaye wamisa imarike engundoqo phesheya HENGYITONG Precision Imveliso Transmission kwisicwangciso, ukwenza amalungiselelo ngokwaneleyo ukuze kwandiswe imarike phesheya jikelele. Ngokudityaniswa kweshishini eliqhelekileyo kunye nokukhuthazwa kweintanethi kunye neemodeli zentengiso, imisebenzi yokuthengisa yobubanzi obuninzi njengemiboniso kunye nokutyelelwa kwabathengi, kudityaniswe nezibonelelo zophando oluqinisekileyo kunye nophuhliso kunye nokwenza ngokwezifiso okungekho mgangathweni, kuphumelele iziphumo ezigqwesileyo kwiimarike zaphesheya, Ukubonelela abathengi ngezisombululo ezizizo zokuphumeza ukunciphisa. Ukonyuka kokusebenza kakuhle kubeka isiseko esiqinileyo sophuhliso lweshishini.
Umthengi ophakathi kuMbindi Mpuma otyikitye intsebenziswano yeqhinga ngeli xesha ngumvelisi woomatshini bokulungisa ubucwebe. Ukusukela ukusekwa kwayo kwii-1960s, inkampani ibisaziwa kwimarike nakwiindawo ezikufutshane. Ngoxinzelelo olwandayo lokhuphiswano kumzi mveliso, ukufumana ukuchaneka okuphezulu, ukusebenza ngokuhambisa okuphezulu kunye nesisombululo esinexabiso elifanelekileyo sokuhlangabezana neemfuno zokwenza ngokwezifiso kube ngumcimbi obalulekileyo kwiinkampani ukufezekisa uphuhliso oluzinzileyo. Ngenxa yokusebenza kwexabiso eliphantsi kwiimveliso zaseJapan nezaseYurophu, kwaye uninzi lweempawu zaseTshayina azinakho ukuhlangabezana neemfuno zazo zokwenza ulwenziwo kunye nokusebenza ngokuhambisa okuphezulu, iimveliso zokunciphisa i-HENGYITONG ziyabonakala.
Emva kokugqiba uvavanyo lwesampuli ye-Wuxi HENGYITONG ukunciphisa, umthengi wanelisekile ngumgangatho we-HENGYITONG reducer kwaye wamangaliswa kukufumanisa ukuba i-Wuxi HENGYITONG ayikwazi ukwenza kuphela izinciphisi ezingenaxabiso kodwa iyazilungelelanisa nezisombululo zokuhambisa ezizenzekelayo zizisa uyilo loyilo. I-HENGYITONG, ngenxa yophando lwayo lwetekhnoloji kunye nophuhliso kunye nobugcisa belifa lenkcubeko, ekugqibeleni ifumene i-batch order ye-reducer ephezulu yeplanethi kunye ne-harmonic reducer, kwaye yafikelela kwisivumelwano sentsebenziswano. Umlawuli waphesheya kwe-HENGYITONG uthe iimeko ezinempumelelo ziya kuqhubeka ukwenzeka kwiimarike zaphesheya kwezilwandle, kudala udumo oluphezulu phesheya kwezinto zase China zokuhambisa ngokuchanekileyo.
Iimveliso zeHENGYITONG ngoku zisetyenziswa ngokubanzi kwiirobhothi zeshishini, izixhobo zomatshini zeCNC, ukwenziwa kobucwebe, ishishini lokukrola kunye nezinye iinkalo, kwaye uqhubeke nokuphonononga nokuphuhlisa amajelo esicelo kwicandelo lezinto ezizenzekelayo, iHENGYITONG iphumelele ngempumelelo inani leemveliso ezitsha ezifana njengeSmart Conveyor Roller Drayivu (imigca yokukhetha ulungiselelo), iNkqubo yokuQhuba iiVili ezisecaleni (iirobhothi ezizenzekelayo) njalo njalo. Ukusukela ngoko, i-HENGYITONG ngokuqinisekileyo iya kubamba amathuba oshishino kwimarike yokuhambisa ngokuthe ngqo yamanye amazwe, idlale isandi esomeleleyo esenziwe e-China, kwaye yenze uphawu lwe-First-Lever yamazwe aphela enamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.